एयरोथर्मी भनेको के हो? र यसको फाइदा के हो? हरियो नवीकरणीय
एयरोथर्मी भनेको के हो?
टमस बिगोर्डा | | नवीकरणीय ऊर्जा, हरियो घर, वातावरण
एयरोथर्मी समावेश गर्दछ प्रयोगमा हाम्रो वरिपरि हावामा निहित ऊर्जा को। यो उर्जा पृथ्वीको क्रस्टले प्राप्त सौर्य ऊर्जाबाट निरन्तर नविकरण भइरहेको छ, वायुलाई ऊर्जाको एक अपार स्रोतको रूपमा परिणत गर्दै।
यो प्रयोग द्वारा बनाइएको हो वायुगत तापीय पम्पहरूमुख्यतया तताउने प्रणालीहरूको लागि र उच्च तापक्रमको सेनेटरी तातो पानीको उत्पादनको लागि।
एयरोथर्मल गर्मी पम्पहरू, परम्परागत एयर-टु-वाटर गर्मी पम्पहरूको विपरीत, डिजाइन र अधिकतम ऊर्जा को लागी निर्मित छन् बाहिरी हावाबाट धेरै गम्भीर मौसम मौसममा, दुबै जाडो र गर्मीमा।
यसको कम्पोनेन्ट्स ओभरसाइज गर्न धन्यबाद, तिनीहरू बाहिरबाट बढी उर्जा लिन सक्षम छन्। तिनीहरूसँग एक विशेष डिजाइन गरिएको कम्प्रेसर पनि छ जसले अनुमति दिन्छ temperatures० डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा माथि काम गर्ने तापमानमा पुग्नुहोस्। यो विशिष्टताले उनीहरूलाई पारम्परिक तताउने प्रणालीमा वा उत्पादनको स्रोतको रूपमा बोयलरहरू बदल्न उपयुक्त बनाउँदछ ACS (सेनेटरी तातो पानी) वर्षभरि।
को विकास वायुगत तापीय पम्पहरू तिनीहरूलाई सम्भावित ताप प्रणालीको वैकल्पिक हुन सम्भव बनाउँदछ। यी दिईएको छ, स्थापना र सुरुवात प्रक्रिया सरल र सुरक्षित छ र उपकरणको यस प्रकारको मर्मत आवश्यकता धेरै कम छ।
एयरोथर्मल गर्मी स्थापनाaमा निर्भर हुँदैन ईन्धन भण्डारण जुन आवधिक रूपमा नयाँ हुनु पर्छ वा विशिष्ट जडानहरू, र मेशिनहरूको स्थान चिमनी वा दहन ग्यासको उत्पादन द्वारा सर्तित छैन।
एक आधुनिक हीटिंग स्थापना एयरोथर्मल ताप पम्पहरूको साथ , हामीलाई कम तापक्रम तताउने प्रणालीहरू सँगै DHW को एक साथ उत्पादनको साथ उचित हाइजिनिक अवस्थामा र राम्रो स्थापना डिजाइनको साथ, समान प्रणालीको साथ अन्य क्षमताहरू नगरी ग्रीष्म coolतुमा चिसो पुर्‍याउन अनुमति दिन्छ।
एयरोथर्मल तातो पम्पहरूको कूल अपरेटिंग लागतहरू त ताप प्रणालीको सब भन्दा कम हो र तिनीहरूको उत्कृष्ट उर्जा प्रयोगको कारण उनीहरूले योगदान पुर्‍याउँछ ग्लोबल CO2 स्तर को कटौती।
1 एयरटर्मिया सफा टेक्नोलोजी हो जसले हावाबाट 77 XNUMX% सम्म ऊर्जा निकाल्छ।
2 एयरोथर्मल सफा उर्जा हो।
3 एयरोथर्मी बचत हो।
एयरटर्मिया सफा टेक्नोलोजी हो जसले हावाबाट 77 XNUMX% सम्म ऊर्जा निकाल्छ।
एयरोथर्मल मेशिनहरू तातो पम्पहरू हुन् पछिल्लो पीढी डिजाईन गर्मीमा चिसो प्रदान गर्न, जाडोमा तताउने र, यदि चाहिएको हो भने, सबै बर्ष भर तातो पानी।
एयरोथर्मल, जब यो तताउने वा तातो पानी मा काम गर्दछ, बाहिर को हावामा निहित ऊर्जा निकाल्छ, को साथ पनि चिसो तापमान र यसलाई कोठामा वा ट्याप पानीमा स्थानान्तरण गर्दछ।
उपकरणको गुणस्तर र यसको उर्जा रेटिंगमा निर्भर गर्दै, हामी प्रत्येक किलोवाट प्रति बिजुली खपतको लागि तातोमा अझ बढी ऊर्जा प्रदान गर्दछौं। Heating. heating तताउने प्रदर्शनको साथ एकाईका लागि, हामी खपत प्रत्येक किलोवाट बिजुलीका लागि k. k किलोवाट हीटिंग पावर प्रदान गर्दछौं। त्यसकारण provided 78% प्रदान गरिएको ऊर्जा नि: शुल्क छ।
एयरोथर्मल सफा उर्जा हो।
जलाउँदैन तातो गर्न केहि छैन। यसले धुवाँ निकाल्दैन। यसले स्थानीय रूपमा दहन उत्पादन गर्दैन।
यो एक यस्तो प्रविधि हो जुन बाहिरको हावाबाट उर्जाको फाइदा लिन बिजुली, मेकानिक्स र रसायन विज्ञानलाई एकताबद्ध गर्दछ। प्रयोग गर्नुहोस् प्रशीतन चक्र फ्रिजेशन र इन्भर्समा, ताप पम्प, तताउने र तातो पानीमा प्रत्यक्ष।
२०१ Paris को पेरिस जलवायु सन्धिको साथ अनुरूप, १ 170० भन्दा बढी देशहरू द्वारा अपनाइएको, हामी पुष्टि दिन सक्छौं कि भविष्यमा वायुमण्डल उर्जा मात्र तापमूलक हुनेछ र मानव गतिविधिको डकार्बोनाइजेशनको एक कुञ्जी हो।
तातो एयरोथर्मल टिकाऊ हो। तातो पम्प नवीकरणीय छ।
एयरोथर्मी बचत हो।
त्यो ऊर्जा हावाबाट कोरिएको सित्तैमा छ।
तपाईं केवल बिजुली खपतका लागि मात्र भुक्तान गर्नुहुन्छ, जुन केवल २२% मात्र हुन सक्छ ऊर्जा योगदान 4,5. of को उपजको साथ मिसिनको लागि (जस्तै तोशिबाको एस्टिया गामा)।
यस कम खपत को लागी धन्यवाद रग्यास विरुद्ध ऊर्जावान, डिजेल, ईन्धनको तेल, प्रोपेन, गोलीहरू ..., पहिले नै कार्यालय भवनहरू, एयरपोर्टहरू, सिनेमाघरहरू, क्लिनिकहरू र कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय वा सार्वजनिक भवनमा उर्जा समाधान हो।
एयरोथर्मल उर्जा घरहरूमा ताप र चिसो प्रणालीको रूपमा पहिले नै वास्तविकता हो, घरेलु तातो पानी (DHW) मा पनि।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » नवीकरणीय ऊर्जा » एयरोथर्मी भनेको के हो?
प्राकृतिक ग्यास ऊर्जा पनि प्रदूषण पैदा गर्दछ
WaveStar सँग अवरोध बिना वेभ पावर